White Tattoo - Kubatsira uye Kukanganisa kweiyi Nyore Dhizaini | Kunyora
Tattoo pane chena, iko nyore kwekunaka kwakanaka
Kunyangwe isu tisingashandise pazviitiko zvakawanda, chena jena zvakare rine mukurumbira mukuru. Mune ino kesi, isu takasara ne machena machena uyezve, neyakareruka uye mashoma. Iyo yakangwara nzira yekushongedza ganda, asi uchigara uchiteedzera zvazvino maitiro.
Mavhoti machena anonyengera kwazvo. Nekusina iyo inki nhema kana mamwe ese mavara, iwo magadzirirwo anoenda asingaonekwe. Asi izvi hazvireve kuti vane runako rudiki pane rwumwe. Nhasi tichaenda kunotsvaga mazano makuru, pamwe nezvakanakira nekuipira kwavo. Wagadzirira?.
1 Ndezvipi zvakanakira iyo chena nyora?
2 Izvo zvakakomba zvakakanganisika zvechena inki nyora
3 Kuseri kwematato machena
Ndezvipi zvakanakira iyo chena nyora?
Zvakanaka, chimwe chazvo chatatotaura. Zviri nezve yako akareruka uye akangwara dhizaini. Ndokusaka kune vese vanoda matatoo asi vasingade kucherechedzwa zvakanyanya, iyi ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa. Nekuti isu hatifanire kuvaratidza, asi zvakaringana isu kuti tivaone isu pachedu. Kwemakore mashoma ikozvino, iyo chena tattoo iri kuve nemukurumbira mukuru.
Iyo inomiririra kuchena kwezvose dhizaini, pamwe nechiedza uye rakanyanya kunaka divi rezvinhu. Ehezve, ipapo, iwe unofanirwa kuwedzera iyo chiratidzo iyo iyo yega tattoo inogona kupa. Ndokusaka tattoo yemaitiro aya, painopora, inoita kunge inosangana neganda rako nenzira yakapfava kwazvo. Zvakare, ivo vanonzi vari nyore kubvisa, kana nguva yasvika yekutora nhanho iyi.
Izvo zvakakomba zvakakanganisika zvechena inki nyora
Aya marudzi ematato haagone kuitwa pane ese marudzi eganda. Sezvo zvisiri zvese zvichamakiswa nenzira imwechete. Naizvozvo, vanhu vane ganda rakatsetseka havafanirwe kusarudza iyo chena tattoo. Kune rimwe divi, haasi ese magadzirirwo anogona kugadzirwa nerudzi urwu rweinki. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kugara uchienda kune akanaka nyanzvi. Iye chete ndiye anogona kukupa zano mune yakadai.
Chinhu chakanakisa ndechekuti kana isu tichishuva zvinhu zvakaita seizvi, izvo zvinogona kunge zvisiri izvo zvinonyanya kudiwa, tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti tinotora matanho akakodzera. Iyo ingi yemhando yakavandudza uyezve, ivo nyanzvi pane iyi nyaya, zvakare. Saka, chokwadi hachina kuoma kuzviwana. Asi yeuka kuti sekuderera, machena matattoo anowanzo kupera nekufamba kwenguva kupfuura nhema inki nyora. Uye zvakare, zvinonzi neiyi inki, kune dzimwe njodzi dzehosha yeganda iri kuitika. Kana iwe uine ganda rinenge rakareruka kwavari, saka funga kaviri.
Kuseri kwematato machena
Iwe unofanirwa kuziva kuti iyi mhando yeingi inoumbwa ne yakawanda mvura chikamu uye pigment. Nhanho dzakafanana hadzishandiswe senge tatoo yakajairika. Muchiitiko ichi, iyo inki chena painopfuura, icharamba yakaita senge rudzi rwevanga paganda. Haisi iyo inki imwechete iyo inowanzo shandiswa kupenda matatto akagadzirwa nemavara akajeka kana matema. Iyo yakawanda kwazvo kupfuura zvatinofungidzira. Asi ichokwadi kuti ine yemhando yepamusoro.
Mune ino kesi, isu tinotaura zvakare kuti ivo chete vamwe vanhu vanokwanisa kwazvo ndivo vachatipa zvigadzirwa zvemhando iyi. Kubata iyo dhizaini inogona kuitwa kuburikidza netemplate kana mahara. Kunyangwe zvingave zvisingaite senge, yekutanga sarudzo yakanyanya kuomarara. Nekuti stencil haigoni kubata inki. Izvo ndezve izvi zvese kuti hunyanzvi uye pamusoro pezvose, ruzivo runodiwa kana tichitaura nezve chena nyora. Ungada here kuita imwe yeidzi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Body Art » Tattoo pane chena, iko nyore kwekunaka kwakanaka
Iyi ndiyo nyowani nyowani yaNeymar: yakatsaurirwa kumwanakomana wake Davi Lucca
Dzinza remhumhi nyora